Maxkamadda Darajada Koowaad ee Boosaaso ma hal beel baa leh
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Boosaaso ma hal beel baa leh?
Maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Bosaaso qaab dhismeed ahaan waxaa loo unkey in ay dhowrto indhahana ku hayso ciddii ku xad-gudubta, kuna tumata shuruucda u degsan mandiqadeena. Maxkamadda waxaa kaloo waajib ku ah in ay ku qaado xukun ciddii denbi galabsata.
Maxkamadda dadka habboon in ay ka shaqeeyaan waa khubaro aad u taqaan culuumta sharciga, waajibkooduna yahay dhawrista caddaaladda.
Akhristoow, tilmaanta kore ee ay maxkamadi leedahay waxaa si toos ah u baal marey maxkamadda derajada koowaad ee magaalada Boosaaso.
Haddii aan u dhaadhaco dulucda qormadayda, maalinimadii bisha May ahayd 7 (ee 2007) waxaa maxkamadda derajada koowaad ee magaalada Boosaaso xukun aan caddaaladi ku dheehnayn ku riddey maraakiib iyo doonyo maamulka shirkada Al xabaabi ee Cadde Muuse ku soo afduubteen xeebaha magalooyinka Qandala iyo Caluula, xukunkaas oo aan jirin wax sharciya oo loo tiigsadey, aanan haysan wax caddaymo ah, aanan lahayn wax haba yaraatee lagu yaqaan qaab maxkmadeed ayaa godoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqey.
Si aan loo khaldin ummadda reer Puntland een ka mid ahay anigu, waxaan door bidey in aan daah furo waxyaabo badan oo aysan saxaafaddu u warhayn, isla markaana aan dhegaystayaal badan oo maxkamadda ila fadhiyey aysan ogayn.
Afduubkii Maraakiibta Iyo Doonyaha
Sida aan horey ugu soo xusey qormadaydii hore, Shirkadda Al xabaabi waa shirkad aan si sharciya uga hawlgelin Puntland, isla markaana aan haysan xasaanada ama ogolaanshaha Golaha Wakiilada DGPL, isla markaana ah shirkad ay si khaas ah u leeyihiin Cadde Muuse iyo ilma adeeriis dhow, una samaysteen in ay biyaha Puntland iyaga maahane aan cid kale uga soo ag dhowaan, isla markaana ummadda ka hor-istaagaan ka faa�idaysiga khayraaadka ilaaheena wayni ku manaystey deegaanadeena.
Hawl-wadayaasha shirkadaas, isugna jira saddex nin oo ay ilmo adeer run ah yihiin Cadde Muuse, lana kala dhaho, Siciid Warmajaale, Cagoole, iyo Ini Cali Qood, waxay dabayaaqadii bishii April (2007) soo afduubteen maraakiib iyo doonyo ku soo wajahnaa deegaanada Puntland si ay u helaan ruqsadda kaluumaysiga Puntland.
Maraakiibtaas iyo Doonyahaas nasiib darradooda raggaasi wax hanti ah oo ka kooban kalluun ay ku tebayeen ma uusan saarneen, waayo waxay ahaayeen gaadiid markaas rabey in ay bilaabaan hawlo kalluumaysi sugayana oggolaanshaha kalluumaysiga ayna ugu maqnaayeen wakiillada gaadiidkaas oo ah muwaadiniin reer Puntland ah.
Oraah baa waxay dhahaysey (who will guard the guard himself?), yaa ilaalinaya ruuxa loo igmadey in uu hanti iyo dad ilaaliyo? Su�aasha aan iswaydiinayo waxay tahay, ma jirtaa cid raggaas wax soo afduubtey soona gashadey shaati dawladnimo ka ilaalin kara denbiyada ay ugu horeeyaan afduubka hantida dadwaynaha.
Raggaasi aan horey u soo sheegey ka dib markii ay ku hungoobeen gaadiidkaas aan wax hantiyi saarneen, waxay ku fekereen in ay baad ka qaadaan doonyahaas iyo maraakiibtaas iyaga oo isku halaynaya maxkamadda degmada Boosaaso.
Hantidaas la soo dhacey waxaa ayaan darro ah in muddo lagu xannibey dekedda magaalada Boosaaso, lagana qaadey xorriyadii, shaqaalihii (Crew) gaadiidkaasna oo ajnabi u badnaa waxaa lagu xirey xabsiyo qarsoodi ah. Sharci ahaan dadkan ajaaniibta ah ma banaana in sidii tuugtii guryo khaas loo leeyahay lagu xiro, la iskana indha tiro in dadkii mas�uulka ka ahaa ay damiintaan. Dastuurka Puntland ayaa qoraya in qofka denbi loo haytso maxkamad lagu soo taago 2 beri gudohood, waxaa xusid mudan in dadkaas 2 asbuuc lagu hayey guryo ay khaas u leeyihiin Siciid Warmajaale, iyo ini Cali qood.
Wasiirka Kaluumaysiga, Dekedaha iyo Khayraadka Badda ee Dowlad Goboleedka Puntland, Siciid Maxamed Raage
Akhristoow, Wasaaradda kallumaysiga DGPL qoraal ay horey u soo saartey waxay ku caddaysey in Dawlada Yamen iyo Masar ay xiriir la soo sameeyeen DGPL isla markaana ka dalbadeen in maraakiibtaas iyo doonyahaas la afduubtey si shuruud la�aan ah loo sii daayo. In kastoo wasiirku isku dayey in uu dawladahaas qanciyo isla markaana ugu yaraan uu xal dhex dhexaad ah keeno, haddana waxaa seef la soo baxey saddexdii kaabe ee xeebta Punland sheegtey, waxayna ku adkeeysteen in maraakiibtaas ay ku ganaaxayaan lacago aan caqli gal ahayn.
Qaabkii loo abbaarey kiiska dacwadda
Muddo dheer ka dib markii wakiillada gaadiidkaasi ka biyo diideen dalabaadkii burcadaas hantida ummadda soo afduubtey, waxaa ugu dameeyntii lagula taliyey burcaddaas in ay waddo macquul ah u maraan hanashada lacagahaas baadda ah.
Waxay soo jiitantoba 6-dii May (2007) waxaa la isla yimid maxkamadda magaalada Boosaaso, Akhristoow maxkamaddaas dhan ee la rabey in dadka si caddaalad ah wax ugu garsoorto ayaa waxay ka koobnayd hal qooys oo isku wada mabd�a ahaa kullina watey hadaf ah in ay helaan lacagtaas aadka u badan ee baadda ah.
Makhraatiga Qura ee la soo kiraystey waxuu ahaa laba alifle Cumar Waaberi, kana tirsan maliishiyada shirkada Al xabaabi. Makhraatigaasi waxuu dhaar ku marey in ay doonyahaas iyo maraakiibtaas soo qabteen iyagoo hawlo kalluumaysi ku guda jira. Su�aashu waxay tahay sidee nin burcad ah, isla markaana hanti ummadeed soo afduubtey isaga laftirkiisu u noqon karaa makhraatiga qura ee denbiga ku caddaynaya kooxda ka soo horjeeda. Sideedaba sharci ahaan makhraatigu waa in uu ahaadaa qof madax banaan isla markaana lagu kalsoonaan karo oon labada dhinac dhanna ka tirsanayn.
Sida maxkamaddaha sharciga ah u shaqeeyaan waxaa kiis kasta oo la qaadayo laf dhabar u ah caddaymo wax ku ool ah isla markaan daah furaya oo waadax ka dhigaya in denbigu xaqiiq ahaan dhacey. Waxaa jira laba cadaymood, mida koowaad oo ah (Direct Evidence) oo ah cadaynta tooska ah, sida in la helo qof joogey markii falku dhacayey, ama isla danbiiluhu qirto in uu denbiga galo. Caddaynta kale waxa weeyaan (Circumstantial Evidence) oo iyadu ah caddayn laga shidaal qaadan karo oo suurta gal ka dhigi karta in denbigaasi dhacey iyadoo la soo daliishanayo waxyaabo badan oo abuuri kara dhibka dhacey.
Hadaba maxkmada Boosaso wax makhraati ah ama caddayn la keeney oo lagu dheeraadey ma jirin.
Qareenka qolada la dacweeyey (Defendants) lama siin wax fursad (jaanis) ah oo uu ku imtaxaamo (Cross-Examination) laba alifle Cumar Waaberi oo ay ilmo adeer yihiin ragga wax soo afduubtey, kana mid ahaa maliishaydii maraakiibta iyo doonyaha soo afduubtey, isla markaana loo qaatey in uu ahaa makhraati.
Xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogey gaadiidkaas la soo afduubtey waa Axmed Taraan, oo isaguna ilma adeer dhow la ah ragga wax soo afduubtey, ninkaasi xeer ilaaliyaha sheegtey ma uusan keenin wax sharciya maxmadda dhexdeeda, mana marin qawaaniinta iyo xeerarka u degsan maxkamaddaha. Waxa uu u dhaqmey sida burcad (gangs) baad ka qaadanaya dad kale.
Qareenka shirkadda Al xabaabi oo magaciisa la dhaho Axmed Barre isaguna waa Cadde Muuse iyo ragga badda ilaaliya walaalkiis, waxa uuna waddo kasta u marey in aanu wax difaac ah samayn, isla markaana dabada ka riixayey in aan wax waqti dheeri ah la siin maxkamadda.
Maxamed Cabdi Awaare | Sawirka: PP
Sidoo kale waxaa xusid mudan in ninka dhan ee loo asteeyey loona xushey in uu garsoore ka noqdo maxkamadda ku taal magaalada ugu wayn deegaanka Puntland ayna ku noolyiihiin dadka ugu badan deegaanka Puntland ee Boosaaso waxa waaye Maxamed Cabdi Awaare, walaalo yihiin wasiirka horumarka reer miyiga Cali Cabdi Awaare, isku qooys dhoowna la ah Cadde Muuse.
Waxaa wax aad looga naxo ah in garsoorahaas oo ah nin da� wayn, uu bar bar marey caddaaladii, ayna qaadey caadifad iyo qabyaalad qaawan, gartana siiyey tolkiisa, isla markaana denbi aan ka harayn ka galey dadkaas ajaanibta ah oo uu ku xukumey lacag aanay haysan oo kun jeer isku laba laabta mushaharkooda.
Haddaba akhristoow is waydii sidee bay ku dhacdey in maxkamad dhan oo dadka u dhaxaysa ay hal reer hawlaheeda iyo maamulkeeda hayaan una isticmaalaan sidii ay doonaan. Maxkamadda derejada koowaad ee Boosaaso waxaa iska leh dadka reer Puntland ee ku nool magaalada dekedda ah ee boosaaso, ma lahan Cadde Muuse iyo qaraabadiisa, hantidii iyo hay�adihii dawliga ahaa kulligood waxay gacan u galeen hal qoys, dadkii kalena waxay noqdeen dad la ilaaway oo aan wax door ah ku lahayn dhulkooda ay u dhasheen.
Makhraati, Qareen, Qaaddi, Xeer ilaaliye, Dacwad ooge kuligood waa isku reer, waxayna ka soo wada jeedaan jifida hoose ee Cadde Muuse ka dhashey, waxaana loo xalaaleeyey in ay dadka dhacaan, aan laga daba hadlin, su�aashuse waxay tahay, Ma u suuroobaysaa hawshaasi? Cidna cid kama xoga badna sida muuqata.
Haddaba guud ahaan xukunkii lagu ridey gaadiidkaas la soo afduubtey, waxa uu reebey fadeexad ma guurto ah, taas oo daaha ka qaadaysa sida Cadde Muuse iyo inta ku xeeran ay ugu tunteen waxii nadaam ahaa ee dadku kuwada heshiiyeen.
Xasuusnoow akhriste in nadaamkaas burcadnimada ah uusan keliya fashileeyn Cadde Muuse, balse uu sidoo kale hurin doonaa kalashaki baahsan oo saamayn ku yeelata dhammaan gobolada Puntland. Sida muuqata Cadde Muuse waxuu fahmi waayey sida loo naas-nuujiyo dadkiisa, sidaas awgeed, aqoon darri darteed waxuu ku dhaqaaqey wax aan cid caqli taam ah qabta ku kacdeen oo laga xishoodo, taariikhdana meel xun ka gasha.
Xaggee Ku Dambeeyeen Saddexdii Ka Tirsanaa Daraawiishta DGPL ee laga Qafaashay Xeebta Puntland
Bishii April ee sannadkii hore ayaa maxkamad ku taal dalka Thailand waxay ku xakuntay 10 sano Akhri
Waxaan ugu baaqayaa Cadde Muuse iyo inta ku xeeran in ay ka tanaasulaan dhaqan xumadaas baahdey, isla markaana maraakiibtaas iyo doonyahaas ku sii daayaan si shuruud la�aan ah, hadii taasi dhici waydona uu Cadde Muuse mas�uuliyadeeda uu diyaar u noqdo in uu qaado waxii musiibo ah oo ay reebto gardarada iyo burcadnimada uu ka bilaabey gayiga Puntland.
Dadka Puntland waxaan iyagana leeyahay iska dul qaada heeryadaas idin dul fuushan, kana dhiidhiya caddaalad xumada lagula kacayo hantidiina iyo naftiinaba.
Waxaan aad ula yaabey erey ka soo baxay garsooraha maxkmada Mr Awaare oo uu digniin ugu jeediyey dadka ganacsatada ah ee mas�uulka ka ah maraakiibta shisheeyaa ah, waxaan leeyahay mr Awaare ilma adeertaa Cali Qood, Warmajaale, iyo Cagoole ayaa mas�uul ka ah jiriifidda badaheena ee hadaad caddaalad ku shaqaynaysid iyaga ka soo biloow, kana toobad keen caddaalad darrada aad ku dhaqaaqdey, lana soco in aan Cadde Muuse weligiis garsoore kugu hayn Karin, ayna iman doonto maalin xitaa kii wax garsoori jirey isagana lagu qaado maxkamadda laguna soo oogo danbiyo ka dhan ah aadamiga oo ay ugu horeeyso caddaalad darro iyo si xun u maamulid caddaalad.
Isku soo wada duub, hadal iyo dhamaantiis, dadwaynaha Puntland indhahooda ayay ku arkaan meesha xaaladda musuqmaasuq ee Cadde Muuse iyo inta ku xeeran ay marayso, waxaa habboon in fadhiga laga kaco lana qaadaco hagardaacada, afduubka iyo burcadnimada.
Puntland Guul Mar Walba
Akhri: Naasnuujinta Cadde Muuse Iyo Musuqmaasuqa Mandaqada Puntland